ဆုံဆည်းရာ: ဇွန်လ၊ မိုးစက်များနှင့် သမိုင်းဝင် အမှတ်တရမှတ်တမ်းများ
ဇွန်လ၊ မိုးစက်များနှင့် သမိုင်းဝင် အမှတ်တရမှတ်တမ်းများ
ဇွန်လသည် မိုးစက်ကလေးများနှင့်အတူ ဆိုက်ရောက်လာတတ်သည်။ ဇွန်သည် မိုးဦး၏ ရှေ့တော်ပြေး။ ၀ဿန္တ၏ နိမိတ်ပုံ။ တနွေလုံး ပူလောင်ကျွမ်းမြိုက်ခဲ့သမျှ ဇွန်လ၏ မိုးစက်ကလေးများ ရင်ခွင်တွင် အေးရိပ်ခိုလှုံ …။
မိုးရာသီမို့ ထက်ရပ်ဝန်းကျင်တွင် မိုးသားတိမ်တိုက်တွေချည်းသာ မင်းမူနေတတ် သည်။ အနောက်တောင် မုတ်သုန်လေဦးကလည်း ဒေါနှင့်၊ မောနှင့် ၀င်လာတတ်ပါသည်။ သူ့ကို လူတို့ မေ့ထားခဲ့သည်ကော။ သူက သိမ်မွေ့ညင်သာ မလာတတ်ပါ။ တခါတရံ မိုးသက် လေပြင်း၊ တခါတခါ ဒေါသမုန်တိုင်း။
ထစ်ချုန်းလျှပ်စစ် မိုးသက်မုန်တိုင်းတို့ဖြင့် ညစဉ် အမေ့ရင်ခွင်ထဲ ခိုဝင် အိပ်စက်ခဲ့ သည့် အရွယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ကျနော် ဆယ့်နှစ်နှစ်သားအရွယ်။ ခြောက်တန်း ကျောင်းသား ကလေးတယောက် ဖြစ်သည်။ မှတ်မိသည်တို့ ရှိသလို၊ မေ့လျော့သည်က များပါသည်။
စာရေးဆရာမကြီး ဂျာနယ်ကျော်မမလေး နေထိုင်ခဲ့သော သူတို့ခေတ်က ဒွန်ဆင် ဘဏ်တိုက်ကြီး။ သုံးထပ်တိုက်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားဖြစ်တော့ မြို့၏ အ.ထ.က (၂) စာသင်ကျောင်း ဖြစ်နေသည်။ မြို့၏ တစင်းတည်းသော မြစ်နှင့် တခေါ်လောက်သာ ဝေးသည်။ ဂျပန်ခေတ်က ကင်ပေတိုင်ရုံး ဖွင့်ခဲ့သည်ဟုလည်း သက်ကြီးများပြောသမျှ သိခဲ့ရသည်။ ထိုကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကျနော် အထက်တန်း အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး၏ “သူလိုလူ” ၀တ္ထုကြီးကို ဖတ်ရသည့်အခါ ဆရာမကြီး နေခဲ့သည့် ကျနော်၏ ငယ်ဘ၀ စာသင်ကျောင်းကြီးကို ပြန်ရောက်သွားသည်။ ထီးကြီးတလက်ကိုဆောင်းထားပြီး ခုံဖိနပ်ကြီးစီးကာ ပင်နီတိုက်ပုံအင်္ကျီကြီးဖြင့် ဆရာကြီး ဦးချစ်မောင်ကို မြင်လာသည်။ မတင်လှိုင် (ခေါ်) သူ့စာရေးဆရာမ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးထံ အလည်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
“ မမ အိမ်ရှေ့မှာ လူတယောက် ရောက်နေတယ်”
“ဟဲ့ ဘယ်သူလဲ။ အိမ်ထဲ ခေါ်လိုက်လေ”
“ ဘုန်းကြီးဆောင်းတဲ့ ထီးလိုမျိုးကြီးနဲ့၊ ခုံဖိနပ်ကြီးစီးလို့”
သူကား ဂျာနယ်ကျော်တိုက်၏ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်သူ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်ပင်တည်း။ မမလေး၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ အလည်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၏ မိုးစက်များ အောက်တွင် တကိုယ်လုံး ပက်ရေတို့ဖြင့် ရွှဲရွှဲစိုလျက်။ အိမ်ရှင်တို့ဟု မခေါ်။ ဒီအတိုင်း တံခါးမကြီးရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်လျက် နေလေသည်။ သူတဖက်သားကို အားနာလိုက်သည်များ မုန့်လေပွေကို ညဘက်စားရာတွင် သူများတွေ အိပ်ရာနိုးမည် စိုး၍ ရေအိမ်ထဲ သွားစားသည် ဟူသတတ်။
မမလေး ရန်ကုန်ရောက်တော့ ကိုချစ်မောင်က လာ တွေ့သည်။ စကားတွေလည်း အများကြီးပြောပြီးပြီ။ နှစ်ဦးသား ပြောစရာမရှိတော့ ကိုချစ်မောင်က ဒီအတိုင်း ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေသည်။ ကြာတော့ မမလေးက
“ ဟို ကိုချစ်မောင် ကျမ သွားစရာလေး ရှိနေပါတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်လည်း ပြန်မလို့ ပြောရမှာ အားနာနေလို့”
အမလေး ကိုချစ်မောင်ရယ် …. မမလေး၏ ရင်ထဲက အငြီးစကားများ …
“ ကိုချစ်မောင် ဘယ်ပြန်မှာလဲ။ ကျမက မြို့ထဲသွားမှာ … လမ်းကြုံရင် လိုက်ခဲ့ပါလား”
“ ဟို … ဟို … လိုက်တော့ လိုက်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ မမလေး နှစ်ယောက်ထဲ သွားရင် လူတွေက တမျိုး မြင်နေမလားလို့”
အောင်မယ်။ သူကများ အကဲပါနေသေးတယ်။ မလိုက်ချင် နေခဲ့။ မမလေး၏ အသံတိတ် ရင်တွင်းစကားများ …
“ဟိုလေ … မမလေးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ငဲ့လို့ပါ။ ကျနော် မလိုက်တော့ပါဘူး”
ဦးချစ်မောင်လို သူလိုလူသည် မချင့်မရဲ ဖြစ်စရာ အလွန့်ကို ကောင်းသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည် ဂျာနယ်အတွက်၊ တိုင်းပြည်အတွက်ကို ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံမှာ ကိုဗဟိန်း၊ ကိုအောင်ဆန်းတို့ကပင် အသိအမှတ် ပြုကြရသည်။ သူသည် ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်၊ အအိပ်မမှန်၊ အစားမမှန် အလုပ်တွင်သာ ဘ၀ကို မြှုပ်နှံထားသူ ဖြစ်သည်။
ဗမာပြည်သည် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ အစိုးရ လက်အောက်တွင် ရောက်ရှိနေရသည်။ အင်္ဂလန်က ဗမာပြည်ကို ဘုရင်ခံထား အုပ်ချုပ်နေသည်။ အင်္ဂလန် ထီးနန်းတွင် ဘုရင်အဖြစ် နန်းတက်လာသည့် ဆဋ္ဌမမြောက် ဂျော့ခ်ျဘုရင် အက်ဒွပ်(23 June 1894 – 28 May 1972)သည် အမေရိကန်သူ တခုလပ်မ တယောက်နှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အက်ဒွပ်အနေဖြင့် အမေရိကန် တခုလပ်မကို ယူမည်လော၊ ထီးနန်းကို စွန့်မည်လော ဟု နန်းတွင်း ပြဿနာ တက်နေခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် အက်ဒွပ် ဘုရင်မင်းကြီးသည် ထီးနန်းကိုစွန့်ကာ တခုလပ်မ( Wallis Simpson)ကို မြတ်နိုးစုံမက် လက်ထပ် ပေါင်းသင်းခဲ့ပါသည်။
ထိုသတင်းကို အင်္ဂလိပ် နေမ၀င် အစိုးရများက သတင်းအမှောင် ချထားခဲ့သည်။ ဦးချစ်မောင်က သူ၏ ဂျာနယ်ကျော်တွင် ဘရိတ်ကင်းန် နယူး အဖြစ် ဖေါ်ပြလိုက်သည်။ ဦးချစ်မောင်ကို နယ်ချဲ့ အစိုးရက ခေါ်ယူကာ သတင်းမှားကို ထည့်ရပါမည်လောဟု ကြိမ်းမောင်း ခြိမ်းခြောက်လေတော့သည်။ ဦးချစ်မောင်က သူ့သတင်း မမှားကြောင်း၊ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ အတိအကျသိချင်ရင် ခု လန်ဒန်ကို မေးကြည့်လိုက်ဟု ရဲတင်းစွာ ပြန်ပြောခဲ့သည်။ ဦးချစ်မောင် ပြောသည့်အတိုင်း အက်ဒွပ် ဘုရင်သည် ထီးနန်းကို စွန့်သွားခဲ့ပြီကော ….။ သူ၏ ဘုရင်သက်တန်းမှာ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်၊ ၁၉၃၆မှ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်၊ ၁၉၃၆ အထိသာ …။
ရွှေလင်းယုံ ကလောင်အမည်ဖြင့် ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်သည် လူထုမျက်ပွင့် ဂျာနယ်ကျော်ကို ထုတ်ဝေကာ စာပေလက်ရာ အမြောက်အမြားကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ မတင်လှိုင် ခေါ် ဂျာနယ်ကျော်မမလေးသည် သူ၏ ပါရမီဖြည့်ဖက် ဘ၀ကြင်ဖေါ် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
“တကယ်တော့ မတင်လှိုင်ဟာ သိပ်တော်တဲ့မိန်းမပဲ။ ဒို့မြို့အတွက် ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းတဲ့ အမျိုးကောင်းသားသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ သူက ကင်းဘတ် ဖိနပ်စီးတယ်။ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်တယ်။ အားကစားလိုက်စားတယ်။ ယောက်ျားကလေး တွေနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်။ ဒါကို အဖွားတို့တတွေက ကြည့်မရဘူး။ ပစ်စာ တွေ ပို့တယ်။ မမလေးကတော့ မဖြုံဘူး။ သူယုံကြည်တာ သူဆက်လုပ်တယ်။ သတ္တိလည်း ကောင်းတယ်။ ခုမှ အဖွားတို့တတွေ သူ့အပေါ် မှားယွင်းစွာ မြင်ခဲ့မှန်း သိကြရတယ် …”
ကွယ်လွန်သွားသော အဖွားဖြစ်သူ၏ သူမသေခင်က မြေးများကို ပြောသွားခဲ့သော ဂျာနယ်ကျော် မမလေးသို့ အလွမ်းစကား ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်မိနေသည်မှာ ထိုညက လမင်းသည် အနှောက်အယှက် ကင်းစွာ လှလှပပ သာနေသည်ကို ဖြစ်သည်။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းပိတ်လျင် သိပ်ပျော်သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထဲတွင် ဗိုလ်နေ၀င်းက သူ့စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုရန် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပသည်။ မဲပေးရသည်။ မဲရုံကိုလည်း သူ့လူတွေကိုသာ စောင့်ခိုင်းသည်။ တတိုင်းပြည်လုံး ကန့်ကွက်မဲမရှိ ထောင်ခံသည်ဟု ကြေညာသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ အခြေခံ ဥပဒေဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုဥပဒေဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်းက ဦးနေ၀င်းကို အာဏာလွှဲပြောင်း အပ်နှင်းလိုက်ပါသည်။ နေ၀င်း နှစ်ဝင်းစလုံး သူတယောက် တည်းသာ ….။
၁၉၇၄ ဇွန်လတွင် ဗမာပြည်ရှိ အလုပ်သမားများ အစိုးရကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြ သည်။ တရားဝင် အလုပ်သမား သမဂ္ဂကို ဖွဲစည်းတည်ထောင်ခွင့်နှင့် အလုပ်သမားထု၏ ရပိုင်ခွင့်များကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဗမာပြည် အရပ်ရပ်ရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှ အလုပ်သမားများ အင်နှင့်အားနှင့် အထွေထွေ သပိတ်တိုက်ပွဲကြီးကို ဆင်နွဲခဲ့ကြ သည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့် မော်လမြိုင် မြို့ကြီးများတွင်ကား သပိတ်အရှိန် အမြင့်ဆုံး နေရာများပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားသပိတ်ကို စစ်တပ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ချေမှုန်း စေခဲ့သည်။ ထိုသို့ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ချေမှုန်းနေစဉ် ဗိုလ်နေ၀င်းသည် သြော်စတေးလ်လီယား နိုင်ငံသို့ တရားဝင်ဖိတ်ကြားချက်အရ ရောက်ရှိနေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သမိုင်း ခြည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံ၊ ဆင်မလိုက် သင်္ဘေကျင်း တို့တွင် အလုပ်သမားနှင့် ကျောင်းသား စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဗမာပြည်သမိုင်းတွင် “ဂျွန်-၆” အလုပ်သမား သပိတ်တိုက်ပွဲကြီးသည် ကမ္ဘာတည် သရွေ့ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်နေမည် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် အလုပ်သမားထု၏ သမိုင်းဝင်မှုကား ၁၈၈၆ ခုနှစ် မေလ (၁) ရက် မေဒေး ….
ဗမာပြည် အလုပ်သမားထု၏ သမိုင်းဝင်မှုကား “ဂျွန်-၆”
ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမားထုကြီးတရပ်လုံး စည်းလုံး ညီညွတ်ကြစေသတည်း … ။ ။
ကိုးကား။ ။ http://en.wikipedia.org/
Posted by ကိုဈာန် at 11:25 PM